Wasiir Ka Tirsan Dawladda Itoobiya Oo Sheegay In Isticmaalkoodda Dekadda Berbera Aanu Saamayn Doonin Xidhiidhka Ay La Leeyihiin Soomaaliya | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargeysa(SDWO): Wasiirul dawlaha ganacsiga iyo arrimha dhaqaalaha ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Dr.Aklilu Hailemichael, ayaa sheegay in adeegsigooda dekedda Berbera ee Somaliland aanu dhibaato u gaysan doonin xidhiidhka ay la leeyihiin Soomaaliya.
Dr. Aklilu oo u waramay wargeyska The Capital ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, wuxuu sheegay in heshiiska dekedda Berbera la nooc yahay kuwa ay la galeen Djibouti iyo Suudaan.
Wasiirka oo la weydiiyay inay Itoobiya ka walaacsantahay khilaafka Djibouti iyo DP world waxa uu yidhi “Maya, arrintani waa mid u taala Djibouti, Itoobiyana way sii wadaysaa isticmaalka dekeda sidii aanu horeba u wadnay. Waxaan kuu damanad qaadayaa Djibouti inay sii ahaan doonto dekeda ugu weyn ee Itoobiya isticmaasho.”
Wasiirka oo la weydiiyay sida uu u arko doodda dawladda Soomaaliya ee ah inay UAE iyo Itoobiya hehiis la galeen Somaliland, wuxuu yidhi “Si guud Itoobiya waxay heshiisyo ula gashay Suudaan, Djibouti iyo Somaliland si ay mujtamaceeda balaadhan ugu hesho adeegyo dekedeed. Si buuxda ayaanu u ixtiraamaynaa siyaasadaha gudaha ee wadamada aanu jaarka nahay.
Waxaanu dekedda Berbera u isticmaalaynaa qaab aan saamayn doonin xidhiidhka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaliya.”
Geesta kale waxa dhawaan dalka UAE heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan horumarinta dekedda Berbera ku wada saxeexday Somaliland, DP world iyo Itoobiya. Itoobiya ayaa horumarinta dekedda Berbera ka iibsatay maalgashi dhan 19%.
Dawladda Soomaaliya ayaa heshiiskaas si cad u cambaaraysay, laakiin dawladda Somaliland ayaa iyaduna dhinaceeda difaacday heshiiskaas oo ay ku tilmaantay mid ay xaq u leedahay.